Maalinta: Diseembar 14, 2017
Waa maxay sababta mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Sivas dib loo dhigay?
Qandaraaska Mashruuca Xawaaraha Xawaaraha ee Ankara-Sivas, oo la qabtay muddo dheer, ayaa la dhammeystirey oo la geeyay adeegga 2014 waxaana loo sheegay dadweynaha oo ay u sheegeen siyaasiyiinta waqtigaas iyaga oo leh war wanaagsan. 2017 ayaa hada socda oo waxaan aragnaa in mashruuca aan la dhameystiri karin. [More ...]
Qalabka dayactirida tareenka ayaa lumay
Intii lagu gudajiray dayactirka wadooyinka tareenka xamuulka ee Izmit, gaari xamuul oo shaqaalihi ay ka soo baxeen ayaa ka soo baxay. Sida laga soo xigtay macluumaad la helay subaxnimadii 11.10 safka Salim Dervisoglu wadada [More ...]
Mid kale oo ugu horreeyay magaalada Istanbul, oo ah magaalada dab-daminta. muddo metro Driverless bilaabay in Turkey. Marxaladda koowaad ee wadada tareenka ee Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe, oo saf muhiim ah u ah gaadiidka dadweynaha, ayaa la geynayaa ka qeyb galka Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. Madaxyada toosan [More ...]
Kormeerka garoonka 3
Wasiirka Gaadiidka Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, oo ah kan ugu weyn adduunka markii la dhammeystiro kontoroolka Maddaarka 3'inci ee caafimaadka iyo amniga shaqaaluhu waa mid aan kala go 'lahayn, ayuu yiri. Arslan gaari kasta oo ka shaqeeya goobta dhismaha [More ...]
TÜVASAŞ wuxuu ku dhawaaqay inay shaqaaleysiinayso shaqaale qandaraas la siiyay shaqooyin kala duwan! Shuruudaha dalabka iyo shaqaalaha shaqa qorista ayaa lagu soo daray sii wadista ogeysiiska. TÜVASAŞ (Turkey baabuur Industry) December 13 2017 [More ...]
Samsun degmada Metropolitan by dhismaha si degdeg ah ka socda oo loo qorsheeyay in xarunta logistics furan in Samsun ee dalka Turkiga ka dib markii Christmas jiray waxyaabo badan oo ka mid ah shirkadaha u furan tahay in ay. Duqa magaalada Samsun Yuusuf Ziya Yılmaz [More ...]
Qandaraaska caalamiga ah ee Dowlada Hoose ee Magaalada İzmir ee dhismaha 7.2 kiiloomitir F.Altay-Narlıdere Metro wuxuu abuuray farxad weyn qeybta dhismaha. Ilaa hadda, 4 waxay iibsatay fayl jilicsan oo 38 ah. shirkadaha [More ...]
Inta u dhaxaysa Adana iyo Adana
Mersin ilaa Adana waxaa loo yareyn doonaa daqiiqadaha 25 Mersin Guddoomiyaha Gobolka Ali İhsan Su wuxuu booqday Xarunta Saadka ee Yenice iyo Xarunta Saadka ee Yenice, oo ay TCDD ka sii wadayso inay dhisto Mersin, oo ay weheliso wariyeyaasha Gobolka Su: le. [More ...]
RayHaber 14.12.2017 Warbixinta Shirka
Cement Cement waxay noqon doontaa nidaamyada farsamooyinka macluumaadka ee la iibsado iyada oo aan loo baahnayn dayactirka qaybta qayb ka mid ah Shaqaalaha dayactirka shidaalka waxaa lagu iibsan doonaa ANKARA Operation DBU-Converter
Tareenka xawaaraha sare wuxuu ka shaqeeyaa magaalada Boosaaso si deg deg ah
Maareeyaha Ku-xigeenka UDH Orhan Birdal, Maamulaha Guud ee TCDD İsa Apaydın iyo 11-12 bishii Diseembar 2017, oo ay weheliso weftiga waxay baaritaan ku sameeyeen Mashruuca Xawaaraha Sare ee Bursa-Bilecik. Tunnel, viaduct iyo [More ...]
Sanadka 2 wuxuu furan doonaa sanadka gudihiisa
Baadhitaankii khadka tareenka ee loogu talagalay Masaajidka 'ıamlıca Masaajidka, kaas oo loo bilaabay in lagu dhiso tilmaamaha Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, Letn Waa in laga arkaa daafaha magaalada Istanbul tamam. Qiimaha khadka metro-ka 425 milyan TL 2 inta lagu gudajiray sanadka [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta ayaa sheegtey in diyaar garowga hindisada wejiga koowaad ee wadada tareenka Konya ay sii socoto marxaladda labaadna lagu bixin doono barnaamijka maalgashiga ee 2018. [More ...]
Taraamka oo sugayey dadweynaha ayaa bilaabay inuu ka hawlgalo wadada lugta hore ee Istanbul Street. Dawlada Hoose ee Düzce, oo u adeegta horteeda qaybta militariga ee taraam, ayaa maalintii ugu horeysay ee muwaadiniintu bilaabeen inay soo jiitaan xiiso weyn. Düzceliler oo ku safraya taraamka, [More ...]